Sei Kuzivisa Chakavanzika Multimedia Zvemukati? ▷ ➡️ Vateveri ▷ ➡️
Dai 12, 2021 0 mashoko 507
Pane iyo Twitter chikuva, kana Mushandisi achiona mifananidzo uye mavhidhiyo MuTweets iwe aunofunga anofanirwa kutarisirwa seChipatara Zvemukati, sekureva kweTwitter Multimedia Zvemukati Policy, une basa uye mvumo yekuzivisa kuTwitter.
Mushandisi, ku shora Mifananidzo nemavhidhiyo muTweets, iwe unofanirwa: Tsvaga iyo Tweet yaunoda kuudza pa twitter.com kana muTwitter application yeIOS kana Android, tinya; sarudza Report Tweet, tinya; sarudza Iyi Tweet ine yakavanzika mufananidzo, tinya.
Mune yemagariro network Twitter iyo mishumo ye Multimedia Zviri Mukati yakamisikidzwa neVashandisi kuti vatsanangure kana vachida meseji yambiro kutevedzera Multimedia Zvemukati Mitemo yeTwitter.
Chengetedza Kuona kweMakavanzika Mapikicha uye Mavhidhiyo muTweets
Kana iyo Twitter Mushandisi inotarisira kugadzirisa marongero avo Mifananidzo nemavhidhiyo mumaTweets; Kutanga, iwe unofanirwa kupinda mu twitter.com, enda kune iyo mirairo nekusarudza yako PC icon uye nekuvatevera.
Zvinoenderana nemirairo, iyo Twitter Mushandisi: Tsvaga iyo Navigation menyu kana iyo icon yeProfile yako, sarudza Zvirongwa uye zvakavanzika, tinya; Dzvanya Pachivande uye chengetedzo; sarudza Chengetedzo, tinya; uye sarudza Ratidza mafoto nemavhidhiyo angave aine zvakavanzika ruzivo, chengeta.
Yakapedzwa nemaitiro, uye Mushandisi akazivisa chikuva Twitter seyakanangana neZvakadai zvirimo. Twitter ichaimaka, asi haugamuchire meseji yambiro kana kuzvibvisa wega pawebhusaiti. Inotarisirwa kubviswa nemunyori wayo.
Ruzivo RWAKO PASI TWITTER
Twitter inopa Mushandisi iyo nharaunda yakakwana kugovana mazano uye ruzivo rwepasi rose; Neichi chikonzero, ichi chikuva chinovimbisa maturusi ekudzora zvinoonekwa nemushandisi weTwitter uye zvinoonekwa nevamwe vanhu nezveMushandisi.
Saka kuti Mushandisi agone taura nechivimbo Pa Twitter, unofanirwa kugadzirisa matanho maererano neTweet, sekuti: Kubaya pamusoro peTweet iwe yaunoda, kuwana sarudzo dzakasiyana dzinopihwa neTwitter zvakananga kubva pane yako yekutanga nguva.
Izvi sarudzo dzinoendeswa a: Stop kutevera, sefa zviyeuchidzo, kuratidza zvishoma kazhinji, mbeveve, bhuroka, chirevo, sarudza rudzii rwezvinhu zvemultimedia zvaunoda kuona mumaTweets papuratifomu.
Maitiro ekudzora zvinoonekwa nevamwe Vashandisi vangu pa Twitter?
Vashandisi ve Twitter vane zvishandiso zvakasiyana siyana uye sarudzo dzinovimbiswa ne Twitter; nazvo, mushandisi weTwitter inokwanisa kudzora zvinoonekwa nevamwe Vashandisi nezvake munhaurirano, mukudyidzana, nezvimwe.
Kudzora, Mushandisi anokurudzirwa chengetedza maTweets ako, vateveri vako chete ndivo vachazviona; tag mapikicha, sarudza kana iwe uchibvumidza chero munhu kuisa mapikicha ako, shamwari dzako chete kana kwete vashandisi veTwitter; kuoneka, chinja marongero eAccount kuti irege kuoneka
Mushandisi anogona kusarudza kuti share nzvimbo yako mumaTweets; Twitter inokupa iwe sarudzo yekusarudza mune yega yega Tweet kana iwe uchida kuisa nzvimbo yako; Pano iwe unofanirwa kufunga nezve mukana wekusaziva vese vateveri vako, iwe unofanirwa kuve wakangwarira.
1 Chengetedza Kuona kweMakavanzika Mapikicha uye Mavhidhiyo muTweets
2 Ruzivo RWAKO PASI TWITTER
3 Maitiro ekudzora zvinoonekwa nevamwe Vashandisi vangu pa Twitter?